Janaayo 16, 2004
Hogaamiyayaasha Madasha shirka oo magacaabey Guddi la............
Hogaamiyaasha siyaasada Soomaalida ee Mbagathi ayaa saakey magacaabey guddi ka kooban 3- hogaamiye.
Hogaamiyayaasha siyaasada Soomaalida ayaa wali ku gudda jira 10-Maalmood ee kulanka wada tashiga oo haatan ka socda Safari Park hotel.
Mid ka mid hogaamiyayaasha siyaasada ee Mbagathi ayaan kula kulmay xaafada Eastleigh ee magaalada Nairobi, hogaamiyaha ayaa ii sheegay in ay wali taagan yihiin 24+cabdiqasim. waxaa kaloo ii sheegay in saakey shir ay ku yeesheen safari Park hotel ay ku magacaabeen guddi ka Kooban 3-qof oo la xaajoota Cabdiqasim iyo golaha badbaadada. waxaa kaloo ii sheegay in shirkii saakey lagu go'aansadey in shir guddoonka kulanka ay la wareegeen.
Guddiga la magcaabay ayaa kala ah :-
1-Maxamed Saciid Morgan
2-cabdalla Deerow Isaaq
3-Mawliid macaani maxamuud.
Waxa kaloo hogaamiyahaasi oo iga codsadey in aan magaciisa sheegin uu war ii raaciyey in shirka Soomali leedahay ,hadda wixii ka danbeeyana shir guddoonka waxaa noqonaya Soomaalida halka markii hore shir guddoonka shirka wadahalda Nabada Soomalida aheyd IGAD, Beesha caalamkuna kor joogto ka ahaayeen.
Faafin: SomaliTalk Jan 16, 2003
Shirka Somalida oo La Joojin Doono Dhawr Bilood Haddii Wax ka Soo Bixi Waayaan 10ka-Beri ee Gooni u Faqa
Hogaamiyayaasha Soomaalidana waxa lagu celin doonaa Soomaaliya haddii 10-beri ee gooni u baxa uu natiijo dhalin waayo sidaas waxaa tibaaxay... Guji... 15/1/04
Kolonzo Misayoka:- waa in war aan la siin suxufiyiinta 10-maalmood ee wada tashiga........
wasiirka Arrimaha Dibada dalka Kenya Muddane Kolonzo Misayoka ayaa hogaamiyayaasha Siyaasada Soomaalida ee shirka wadahadalada Nabada ee ka socda dalka Kenya ka codsadey in ayan la kulmin ama war siin suxufiyiinta... Guji... 12/1/04